Tambatry ny Nosy
Tsy fitaovan-dRavalo i Pety Rakotoniaina
« Làlana iray tsy azo ialana ny fihaonana an-databatra boribory, satria tsy misy fampandrosoana azo tanterahana eto raha tsy voalamina ny olana ara-politika ». Fanambarana hentitra nataon’ny ben’ny tanànan’i Fianarantsoa, Pety Rakotoniaina, omaly, tany an-toerana io, raha nahita ny fiainam-bahoaka miha latsaka ao anatin’ny fahantrana amin’izao fotoana izy.
Ny olona izay mihevitra fa manana fahefana na haka fahefana amin’ny fomba tsy demokratika, dia tsy hiteraka fandrosoana. Ka raha tena vonona isika fa hanao ny fampandrosoana dia tanteraho ny fifampidinihana, handraisan’ny maro anjara. Ny tsy azo ekena dia ny filazan’ny hafa fa ny mpitondra sy ny mpanohitra ihany no manao ny dinika, satria raha ny zava-misy, dia latsaka an-katerena ny Firenena. Manomboka kivy ny olona ary manahy ny hiverenan’ny tamin’ny taona 2002, satria ny Malagasy dia miandrandra fandrosoana, rariny raha mandray anjara amin’io ny rehetra. Raha miziriziry amin’ny heviny ny fanjakana, dia tompon’andraikitra amin’izay miseho ry zareo.
Nomelohin’ingahy ben’ny tanàna ihany koa ny filazan’ny filohan’ny TIM Razoharimihaja, sy ny praiministra Sylla, fa tsy ilaina ny fifanatonana, « midika ho fampidirana amin’ny kizo ny Firenena izany ». Raha ireo asa maro tanisain’ny mpitondra fa vitany ankehitriny, dia tsy misy tokony atahorany ny amin’io dinika io, hamoriana ny hery velona, ka izay tapaka eo no hitodrana ny tany sy ny fanjakana. « Tsy mamono antoka io, na dia hisy vola ho lanian’ny fanjakana aza ao, raha tsy hoe hanao hala-bato angaha ». Ny filoha Ravalomanana koa dia rariny raha mandray anjara amin’ny ady hevitra, fa tsy solontena no alefa hanelanelana.
Fitaovan-Ravalo ny Tambatra
Manoloana ny fananganana Tambatra manerana ny Nosy, izay toa miteraka resabe etsy sy eroa, dia notsipihan’ingahy Pety Rakotoniaina mazava : « ny olona mihevitra fa tsy tokony hisy korontana eto amintsika. Ilaina ny manana fomba fijery iraisan’ny Malagasy hina, hisorohana ny fifandonan-dava eto. Koa ny tanjon’ny Tambatra eo amin’ny raharaham-pirenena dia ahafahan’ny Malagasy tsy ankanavaka maneho ny heviny. Ny hevitra amin’izay no omen-danja, ary aoka tsy apetraka intsony ny filazana fa hevitra avy atsy io ka atao tsinontsinona ». Aely ny loto isan-karazany fa « meriseneran-dRavalo » ny Tambatra mba hampiasaina amin’ny fifidianana. Diso io satria « raha voavidy vola teo anatrehan’ny fitondrana nifanesy ny tenako, dia nijanona ho prezidàn’Antananarivo Ravalo. Dadabeko Ralaimongo ka tsy hitondra tantara ratsy ho an’ireo olona nitolona ho an’ny tanindrazana aho. Aoka ho tsapan’ny rehetra fa tsy mba niovaova hevitra aho tamin’ny politika nataoko, fa ny foto-kevitro no nahalany ahy. Ary mbola tsy nisy fifidianana nandraisako anjara ka tsy nahavoafidy ahy, satria olon’ny fanjakana hatrany no nifanandrina tamiko ».
Ratsiraka mandalo, Ravalomanana mandalo, fa i Pety mitoetra ka tsy azo vidiam-bola.
Mahamenatra raha ny fomba ratsy nataon-dRatsiraka no mbola averina amin’izao fotoana izao, amin’ny fanerena ireo mpampianatra hiditra ao amin’ny antoko iray. Hita taratra ireo ao amin’ny Faritanin’i Fianarantsoa izay tsy maintsy miditra ao amin’ny TIM Fanabeazana avokoa ny rehetra. Manakaiky tokoa ny fifidianana, ka ireo no entina handaniana ny kandidàm-panjakana.
Fa raha ny tontolon’ny fampandrosoan’ny kaominina any an-toerana kosa, dia voalaza fa tsy ampy ny vola amin’ny fampandehan-draharaha ao Fianarantsoa. tsy mety raha ny mpitondra any an-tampony no mijery ny fampandrosoana, ka raha tsy iray antoko aminy na ihany koa mandadilady any, dia tsy mahazo avara-patana. « Aoka atao ara-drariny, hoy i Pety Rakotoniaina, ny fitsinjaram-pahefana. Ny ONG sy ny fiangonana no akaiky ny vahoaka, koa rariny raha miainga amin’ireny ny tetika amin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny rehetra ».
Ireo raha atao indray mibango ny resaka nifanaovana tamin’ny ben’ny tanàna ao Fianarantsoa I; ary tsy mbola nilaza ny heviny izy aloha, raha hilatsaka ho filoham-pirenena na tsia, fa ny maika izany aloha dia ny hirosoana amin’ilay diniky ny olom-pirenena rehetra.
Madagascar Tribune 24/04/06